Kooriyaa Kibbaa: Kooriyaan Kaaabaa 'misaayela dhukaasuuf qophiirra jirti' - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaa Kibbaa: Kooriyaan Kaaabaa 'misaayela dhukaasuuf qophiirra jirti'
4 Fuulbana 2017
Koriyaan Kaabaa yaalii misaa'eela yeroo ja'aaffaaf Piyoongyaang taasifteef deebii kennituun irratti eddoo nikulaaraa Koriyaa Kaabaa iraatti shaakala haleellaa jalqabde.
Shaakalli haleellaa qilleensa misaa'eelii eegalamees jeettiiwwan waraanaa fi lafa irraa ture.
Kunis kan jalqabame bataluma ajajaan humna ittisa Ameerikaa Jemis Maatiis, Piyongyaang yoo haala Ameerikaa fi sharikoota ishee kam iyyuu irratti balaa fiduu danda'u raawwattee 'humna waraanaa olaanaan deebii' kennina jedhanitti ture.
Koriyaan Kaabas boombii haayidrojiinii misaa'eelii lafa furguggifamu danda'u irratti kan galuu danda'uun shaakkalu jette.
Piyangyoong irra deebiin uguura motummoota gamtoomanii fi dhiibba hawwaasa adunyaatiin irratti godhama jiru gara cinaatti dhisuudhaan qabeenya misaayila guddisuu, yaalii geggeessu fi tutuqaa waraana itti fuftee jirti.
Ji'oota lamaan darbaan keessatti Koriyaan Kaabaa yaalii misaa'eelii kan biyyoota kutuun furgugifamuu danda'u yaala turteetti. Misaayila tokko biyya jaapaan irra qaarisiisuun galaan Paasifik keessa akka bu'u yeroo gootu, daangaa Amerikaa keessatti kan argamtu dachee Gu'aam jedhamutu irrattis nan darbadha jechuudhaan sodaachisuun ishee ni yadatama.
Goodayyaa suuraa Koriyaan Kibbaa suuraa kana gaafa Wiixataa gadhiiste
Dhimmuma kana irratti mari'achuufis Kaawunsiliin Nageenyaa Mootummoota Walta'anii Wiixata marii yeroo arriifachiisaa gaggeessuuf.
Marii sana dura, geggeesitoonni Koriyaan Kibbaa fi Jaappaan bilbilaan mariachuun tarkaanfiin cimaan Koriyaa Kaabaa irratti akka fudhatamu irratti waligalaniiru. Mootummoonni walta'an akka isaan murtii cimaa ta'e tokko fudhachuu danda'an irratti dhiibba gochuudha jechuun dubbi himaan mana mootumma Koriyaa Kibba beeksisaniiru.
Kaawunsiiliin Nageenyaa jia Hagayyaa darbe keessa meeshaa Koriyaan Kaabaa ergitu irratti uggurra gochuun isaa ni yaadatama.Kooriyaan Kaabaa 'misaayela dhukaasuuf qophiirra jirti'
Faayidaan Shaakala geggeessu maaliidha?
Hojataan BBC Roobiin Braant Siiyol irra akka jedhutti, biyaatiin akka of eeganna olaanaatti akka fuulleefatu kan ishee godhuudhaa jedha. Koriyaan Kibbaa yaaliin isheen goote meeshaa waraana idla ilaalchisee ture. Biyyatiin dandeetti Meeshaa Niukilaraa hinqabdu. Haa ta'u malee humni waraana Koriyaan Kibbaa shaakalli waraana keenyaa Punggye-re kan jedhamu bakka Koriyaan Kaabaa irratti yaalii geggeessa turte irratti kan qiyyaafateedha jechuun dubataniiru.
'Humni waraana keenya bakka doorsisii irraa nuti godhaamu barbadeessu qofa utuu hinta'in angaawwota diinaa fi humna Kitlayoota gargaarsa isheef kennan dabalate nageenya uummata keenyaaf kan sodaachisan hunda irratti jechuun Koloneel Rooh Jee-cheoon dubbi himaan raayya waraana Koriyaa Kibbaa madda godhachuun dhaabata oduu Yoonhaap himeera.
Mootummaan Koriyaa Kibbaa fi Ameerikaas tartiiba amma jiru xinxaluun Koriyaan Kibba kuusa bilaatik misaailaa dachaan dabaluu akka dandeesuuf yaada waligaltee irra gahaniiru, jechuun Yoonaap gabaaseera.
Goodayyaa suuraa Miidiyaan mootummaa Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa, Kim Joong un ennaa boombii haayidiroojinaa daawwatan agarsiise
Yaaliin nukilaaraa akkamitti ibsamaa?
Dilbata darbe Seismoologistoonni naannoo bakka Koriyaa Kaabaa nukilaara itti yaaltu irratti meeshaan isaanii kerkeri lafaa akka jiru dubbisse.
Qorannoon haala dachee (geological) kirkirri lafaa Iskeelii 6.3 akka ta'e muli'seera.
Taka turunis mediyaan Koriyaan Kaabaa yeroo ja'afaaf yaalii niukilaraa isaa humna olaana qabuu godhamedha malee kerkeera lafaa miti jechuun mirkanneessera.
Kunnis Dhukaasa hydroojiin boomb kan jedhamu kan niukilara lafa fagootti murxuxxifamuu danda'u wojjin kan deemu danda'uuf humna isaatiin olaana isa ta'e dha.
Kanumatti aansuun Piyoonuaangis suuraan prezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-uun, boombii haaydroojiin isaa haaraa jedhaame kana wajjini ka'aan midiyaa mottumaa irratti agarsiisaniiru.
Dangaa Kaaba Koriyaatti bakkawwan kerkerri kun itti dhgahametti, jiraachuu radiashonii ilaalchisee Koyriyaa kaabaa wajjin qorannoo gochaa akka turtan angaawonni Chaayinaa dubataniiru.
Oggeessoti of eegannoof waamicha haa godhaniyyu malee, yaaliin niukilaara Koriyaan Kaaba Dilbata goote kun kan yeroo darbee hundumaarra itti milkoofte turte. Ergaan isaa ifaa ifatti beekamadhaa. Kunnis Koriyaan kibbaa hammam humna nuikilara siritti hojjetu humna akka qabdu agarsiisuuf jedhameera.
Yaaliin kun akkamiitti ilaalame?
Yaaliin niukilaara kun kan Prezidaantii Ameerikaa Doonald Traampiin aarsuu dheekamsiise yeroo ta'u bataluma sana kun gochaa 'balaa fiduu fi dubbi barbaachuutti' jecchuun bira darbanii biyyatti Kaaba sana 'biyya seera hinbeekne' jechuun balaalefataniiru.
Itti dabaluunis, Ameerikaan biyyota Koriyaa Kaabaa wojjin daldala geggeessan hundaa wojjin daldala dhaabuuf yaada akka jirtu ibsaniru. Koriyaan Kaabaa daldala ishee biyya alaa wojjin gootu keessatti harka 90 ol Chaiynaa wojjin akka ta'e beekamaadha.
Ameerikaan doorsissa irra gahu ilaalchisee 'tarkaanfii waraanaa cimaa' ni fudhatti, kunnis 'haala safisaa fi qindoomina' qabuun kan godhamuu malee, haala biyyatti Koriyaa Kaaba raawwatee barbaadessuun miti jechuun Maartiis boodarra gabastootatti dbuatanittiiru.
Prezidantiichi koriyaa Kibba Muun Jee-in 'Tarsimoo dogogoraa fi cigaasissa' jechuun yaalii Koriyaan Kaaba goote kan balaalefatan yeroo ta'u, deebii 'daran jabaa' ta'ee fi uggura 'biyyatti raawwatee qofatti ishee hambisu' manni marii nageenya kan mootummoota wal ta'anii akka irra ka'uu waamicha godhaniiru.
Itti ansuunnis Chaayinaan 'jabisitee balaalefachu ishee' kan ibsite yeroo ta'u, mootummaan Koriyaa kaba 'mormii hawwaasni addunyaa irraan gaha jiru gara cinaatti dhiifteetti' jechuun dubbateetti.
Yaaliin niukilaraa godhamu kun maal nuu ibsaa?
Angawwoonni Koriyaa Kibba, yaaliin kun kan geggeefame bakka Punggye-ri jedhamutti yeroo ta'u kunnis naanno Kiljuu kessatti kan argamuudha jedhaniiru.
Kerkeerri sababa yaalii niukleera yeroo ja'afaaf ta'e kunnis kan yeroo shanfaaf ta'ee wojjin yeroo madalamu harka 9.8 kan caalu ta'uun isaa dhaabanni qilleenssa biyyatti beeksiiseera.
Haaydroojiin boombiin kun dacha baay'eedhaan Atoomik boombii kan caaluudha. Kunnis atoomota heddu walitti makuun akka humna guddaa burqisiisu godhame kan hojjetamu yeroo ta'u Atoomik boombiin immo walitti dabala niukilarii ta'ee atoomota kan adda baasuun hojjetamuudha.
Xinxxaltoonni gaafiin Koriyaa Kaabaa haala of eeganno guddaa qabuun ilaalamu qaba haa jedhan malee, dandeettiin niukileera kan biyyatiin qabduu haalaan guddataa jirachuun isaa ifaadha.